တန်ဖိုးအလွန်ရှိသော သဘာဝဆေးမြီးတိုများ | MyFood Myanmar
ကြက်ဟင်းခါးအစေ့ကို ဆားနှင့်ရောပြီး ညက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ရလာသောအနှစ်ကို အရက်အနည်းငယ် နှင့် <!–more—> သင့်ရုံ ဖျော်ပြီးနောက် ရလာသော အရည် နှင့် ၀က်ခြံများကို လိမ်းပေးပါက သက်ခြံများ ပျောက်ပါသည်။
ငါးရိုးစူးလျှင် လည်ချောင်းထဲမှ ထုတ်မရပါက လျင်မြန်စွာ ကြက်ဥအစိမ်းကိုခွဲပြီး တစ်ခါတည်း မျိုချလိုက်ပါက ငါးရိုးသည်တစ်ခါတည်းလျှောကျသွားပါလိမ့်မည်။
ခြေထောက်ကို သံစူးလျှင် သက်သာနည်း ….
သံစူးသောနေရာတွင် ဆားနှင့်ဂျင်းကို ကြိတ်ပြီး အုံပေးပါ။ သံအဆိပ်ရှိသမျှ ၄င်းဂျင်းထဲသို့ ကျလာပါလိမ့်မည်။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ခါအုံပေးရပါသည်။
အမျိုးသမီးများ ဆံပင်ကျွတ် သည်ဆိုပါက ပျားရည်နှင့်ဂုံညင်းခဲတို့ကို သွေးပြီး ဆံပင်ကို လိမ်းပေးပါက ဆံပင်များ ကျွတ်ထွက်ခြင်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
ဒန်းကျွဲစေ့ခြောက်ကိုမီးနှင်လှော် အမှုန့်ပြုပြီး ကော်ဖီနှင့်ရော သောက်ပါ။
ကိုယ်လက်ပင်ပန်းပြီး ခေါင်းကိုက်လျှင် သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကို အနှပ်ရည်ကျကျထဲသို့ ထည့်ပြီး သောက်ပါက ခေါင်းကိုက်သက်သာ ပျောက်ကင်းပါသည်။
နှလုံးရောဂါ နှင့် နှလုံးတုန်ပျောက်နည်း ….
ဗာဒံစေ့အနည်းငယ်ကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး နွားနို့ နှင့်ရောစပ်ပြီး နေ့စဉ် မှန်မှန် သောက်ပါက နှလုံးရာဂါ နှင့် နှလုံးတုန် မောပန်းတာ ပျောက်ကင်းပါသည်။
ဆားအလွန်ပါသော ငံလွန်းသည့် ငါးခြောက်ကို မငံစေလိုလျှင် ဆားများကို ရေနှင်ဖျော်ပြီး ထိုဆားရည်ထဲတွင် ဆားအလွန်ငံသော ငါးခြောက်ကိုစိတ်ပြီးထားလျှင် မငံတော့ဘဲ့ အရသာ အလွန်ကောင်းလာပါသည်။
ညှီိနံ့ ပျောက်နည်း ….
အမဲသား၊ ဆိတ်သားချက်သော ဟင်းအိုးထဲသို့ မီးသွေးအနည်းငယ် ထည့်ပြီး ချက်ပါက မကောင်းသော်အညှီနံ့ များပျောက်ပါသည်။
သဘာဝကျောက်သွေးအား ဘယဆေးဆိုင်မှာ ၀ယ်ယူပြီး မကျီးစေ့ခန့်အား သံပရာရည်နှင့်ဖျော်ပြီး မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန် နှစ်ဆယ့်လေးရက် ပတ်လည်အောင် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သွေးတိုးရောဂါများအား ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ပန်းခိုင်၊ ပန်းခက်ထည့်သည့် ပန်းအိုးထဲသို့ ယမ်းစိမ်း အနည်းငယ်ထည့်ပြိး မွှေပေးပါက ပန်းများတာရှည်ခံပါလိမ့်မည်။
ကုလာထိုင်များအောက်က ညွတ်နေလျှင် ခိုင်ပြီးဖြောင့်မတ်အောင် လုပ်လိုပါက ၄င်းကိုရေနွှေးနှင့် ဆေးကြောပြီးနောက် လေဟာပြင်မှာ လှန်းထားပါ။
အ၀တ်အထည်ပိတ်စများတွင် မှင်စွန်းလျှင် အမဲဆီကို အရည်အဖျော်ပြီး မှင်အစွန်းကွက်ပေါ်သို့ချပါ။ ထို့နောက်ရေနှင့် လျှော်ဖွပ်လျှင် မှင်စွန်းပျောက်ပါသည်။
အ၀တ်အထည်များ လက်ဖက်ရည်စွန်းလျှင် ရေနွေးပူပူနှင့် ထိုစွန်းနေသောနေရာကို လောင်းပါက ပျောက်ပါသည်။
အင်္ကျီအ၀တ်အထည်များပေါ်တွင် ဆေးလိပ်မီးပွါးကျသော်လည်းကောင်း၊ မီးပူကျွမ်းလျှင်လည်းကောင်း၊ ကြက်သွန်ကို ထက်ခြမ်းခွဲပြိး ပွတ်တိုက်ပါကပျောက်ပါသည်။
အ၀တ်အထည်မျးမှာ ကွမ်းသွေးစွန်းလျှင် နို့ရည်ကို စွန်းနေသောနေရာပေါ်သို့ ဆွတ်ဖြန်းပေးပါက နို့ရည်ခြောက်သွားလျှင် အစွန်းပျောက်ပါသည်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥရည် အစွန်းကွက်ပျောက်နည်း….
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥရည် အစွန်းကွက်သော အ၀တ်များကို ရေမှာ ကြာကြာစိမ်ထားပါ။ ပြီးတော့မှ နာနာပွတ်ပြီး လျှော်လျှင် ပျောက်ပါသည်။
အ၀တ်အထည်များ သံချေးစွတ်းလျှင် သံပုရာရည်တွင့် ဆားဖျော်ပြီး ထိုအစွန်းကွက်နေသော နေရာကို ဆွတ်ဖြန်းပြီးလျှင် အထည်ကို နေပူတွင်လှန်းပါ။ အကွက်မပျောက်လျှင် နှစ်ခါသုံးခါထပ်ပြီး သုတ်လိမ်းပေးပါ။
အ၀တ်အထည်ပေါ်ရှိသော ဆီကွက်ကို ဇ၀တ်သာပါသော ရေနွေးပူပူဖြင့် ဆေးကြောလျှော်ဖွပ်ပေးပါက ဆီအစွန်းပျောက်ပါသည်။
ဆော်ဒါမှုန့်ကို ရေနွေးပူပူတွင်ဖျော်ပြီး ဆပ်ပြာရည်ထဲသို့ ထည့်ပြီးလျှော်ပေးပါ။
စင်ကြယ်သော အ၀တ်ဖြူကိုရေဆွတ်ပြိး ဖားဥစွဲနေသော အမဲပျောက်များအပေါ်က ဖုံးအုပ်ပြီး မီးကူတိုက်လျှင် ဖားဥများ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။
သက္ကလပ်ထည်၊ ဖလန်နယ်စသည်တို့ကို လျှော်ဖွပ်ပြီး ကြိုးတန်းပေါ်တွင် အ၀တ်ကို ရေမညှစ်ဘဲ ဖြန့်လှန်းထားပါက အ၀တ်မတွန့်တော့ပါ။
ရေထဲတွင် ဇ၀တ်သာရည် ခပ်ပြစ်ပြစ်ထည့်ပြီး သွေးပေနေသော အ၀တ်အထည်ကို အတော်ကြာကြာ စိမ်ထားပြီးမှ လျှော်ဖွပ်ပေးပါက သွေးစွန်းပျောက်ပါသည်။
သခွားသီးအခွံကို ပါးပါးလှီးပြီး ပုရွက်ဆိတ်နေသော နေရာများတွက် ချထားလျှင် ပုရွက်ဆိတ်များ ထွက်ပြေးပါလိမ့်မည်။
လှော်ပြီးသား ဆိုဒါမှုန့် နှင့် သွားတိုက်ပြိး ရေနွေးနှင့် ကျင်းပစ်လျှင် သွားကိုက်သွားနာ သက်သာပါသည်။
ရေနွေးအပြည့်ရှိသည့် အပေါက်ဝကျယ်သော ပုလင်းတစ်လုံးကို ယူပြီး ဆူးစူးသောနေရာကို ပုလင်းပေါ်မှ ဖိနှိပ်ပါ။အသားသည် ပူနွေးသည့်အငွေ့ ဖြင့် ပုလင်းထဲသို့ အနည်းငယ်စူးဝင်သည် နှင့် (၃.၄) မီနစ်ကြာသောအခါ အဆူး ကျလာပါလိမ့်မည်။
နူးညံ့သောအ၀တ်စကို နို့ထဲတွင်စိမ်ပြီး ကိုက်ခဲသောနေရာကို ပွတ်ပေးလျှင်အလွန်ဆိုးသောရောဂါ ဖြစ်စေကာမူ ချက်ချင်းပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ရေနွေးဖြစ်စေ၊ မီးပူဖြစ်စေ၊ လက်ခြေ စသည်တို့ကို အပူလောင်လျှင် ရေတွင်ဆားကိုများများထည့်၊ ပြစ်နေအောင်ဖျော်ပြီး ၄င်းအပူလောင်သည့်နေရာကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။
ကြွက်များသွားလာလေ့ရှိသော နေရာများမှာ ပူစီနံရွက်ဖြစ်စေ၊ ပင်စိမ်းရွက်ဖြစ်စေထားပါက ကြွက်များသေချာပေါက် ထွက်ပြေးပါလိမ့်မည်။
စင်ကိုမြက်အား ဆွဲနှုတ်ပြီး အမြစ်ဖြူဖြူလေးတွေကို ဓါးနှင့်ဖြတ်ယူပါ။ နို့ဆီဗူးတစ်လုံးစာအား ရေပြောင်အောင် ဆေးပြီး ဒန်အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ နနွင်းမှုန့် ကော်ဖီတစ်ဇွန်းစာလောက် ထည့်ပါ။ ကြက်ခိုးမှိုင်း အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ရေသောက်ရေခွက်နှင့်သုံးခွက်စာထည့်ပြီး တစ်ခွက်စာကျန်သည်အထိ ကြိုချက်ပါ။ ပြီးလျှင်သေချာစွာ အမှိုက်များစစ်ပြီး နေ့စဉ်သောက်ပါ။ ရောဂါရင့်လျှင့် ခုနှစ်ရက်၊ ရောဂါနုလျှင် ငါးရက်နှင့် ပျောက်ပါသည်။
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းပြီး အသက်ရှူမ၀ခြင်း၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ မကြာဏ သက်ပြင်းချခြင်း၊ မောခြင်းများအတွက် ဂျင်းဆယ့်ငါးကျပ်သားအား ကြေအောင်ထုထောင်းပြီး ပြည်ဝင်ဒန်အိုးထဲသို့ ထည့်ပါ။ ဆားလက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေများများထည့်ပြီး ဆူအောင်ပြုတ်ပါ။ ခြေထောက်စိမ်ရန် ဇလားတစ်ခုခုထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။ ခြေဖ၀ါးအား ပရုတ်ဆီ(သို့) လိမ်းဆေးအဆီတမျိုးမျိုး သုတ်လိမ်းပါ။ ပြီးလျှင် ခြောက်ထောက်နှစ်ချောင်းစလုံး အားဂျင်းပြုတ်ရေ အပူခံနိုင်ရုံထားပြီး စိမ်ပါ။ နောက်တစ်ဦးမှ ခြေဖ၀ါးမှာရှိသော အကြောများပြေအောင် လက်မဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးပြီး ခြေခုံ နှင့် ခြေသလုံးအား သွေးလှည့်ပတ်မှု ကာင်းအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း သုံးရက်တစ်ကြိမ်ြ ပုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာ လာပါလိမ့်မည်။
MyFood Myanmar2017-12-23T21:39:58+06:30December 5th, 2015|Knowledge|